192.168.8.1 - Nzira Yekutsvaga Default Router IP?
Nzira yekuwana sei Default Router IP?
Kuti umise router yako, uchafanirwa kupinda mairi. Saka ita izvozvo, iwe unofanirwa kuzvinzwisisa IP kero. Iwe unogona kuve nechokwadi cheiyo default router IP kero. Kero ye IP ine manhamba mana akapatsanurwa nezvimisikidzwa. Kero yeIP kero yenetiweki inotanga na4. Kazhinji maRouters anosanganisira IP kero senge 192.168 kana 192.168.0.1. Zvinoenderana nekombuta kana chishandiso, nzira yaunowana yako IP kero ye router ichave dzakasiyana. Pazasi pane matanho eimwe neimwe.
Kutanga, unofanira kuzvitsanangura nemazita maviri aya - "router IP" & "default IP gedhi." Iyo rauta IP inoshanda senge yekupinda pakati pezvishandiso zvako neinternet yakazara ndosaka ingatozivikanwa se "default IP gedhi kero. ” Zvese zvishandiso zvakabatanidzwa pane yakafanana network zvinoratidzira zvavanoda nekutadza kune iyo router. Zvishandiso zvakasiyana zvinozozvipa zita. Windows PCS inozoitumidza 'default gateway' nepo maturusi eIOS achichengeta iyo router kero yeIP pazasi 'router.'
Mushure mekunge iwe Uwane Yekusarudzika Router IP, unogona kungoinyorera mubhurawuza rebhurawuza rewebhu kuti upinde mairaira ewebhu interface.
Enda kumutemo wekukurumidza nekutora yekutsvaga bar & kunyora 'cmd'. Iwindo rakasviba rinoonekwa kwauchazoda kunyora 'ipconfig'. Nezve iyo default gedhi kero tarisa mhinduro.
Pazasi pane matanho ari nyore kwazvo kutarisa iyo IP IP:
Chindai apuro menyu (pamusoro pechidzitiro)
Sarudza 'Sisitimu Kutanga sarudzo'
Press the 'Networkchiratidzo
Sarudza inoenderana netiweki chinongedzo
Sundira iyo 'endererakiyi
Sundira iyo 'TCP / IP'kiyi yekuona iyo IP kero pane iyo router kurudyi
Kutanga, tsvaga iyo nzira yeku: Zvirongwa> Zvishandiso zveSystem> Terminal & nyora 'ipconfig'. Iwe uchawana iyo rauta IP yakanyorwa kunze kwe 'inet addr'.
Kana iwe ukashandisa iOS8 kana iOS9, uchienda kune Zvirongwa> WiFi & cindezela iwo waya asina waya kwauri kubatanidzwa parizvino. Zvichida chikamu cheDHCP chekutsvaga kune IP rauta.
Yechitatu-bato app inozivikanwa seWi-Fi Analyzer ndiyo yakapusa nzira yezvishandiso zveApple. Kutevera kubatanidza kune iyo app, rova ​​pane iyo 'Tarisa' menyu uye sarudza 'AP runyorwa'. Iwe unozoona 'yakabatana ne: [Networks Zita]'. Kana iwe ukarova pairi, hwindo rinoratidzirwa ruzivo rwenetiweki neiyo IP router.
Mubharaki rebasa, tinya iyo yambiro nzvimbo. Wobva wadzvanya pane yakabatana ne [Networks Zita] 'pane runyorwa rwunobuda Rova pazita remasaiti asina waya uye rinotevera pane 'Network' label kuratidza kudonha ne IP kero ye router.
Nzira Yekutsvaga Yekusarudzika Router IP
Kuti uwane iyo default IP Kero yeiyo router ingo tevera pazasi matanho akapihwa -
1) yebara rebasa Shanyira iyo yekutanga menyu & yekuisa CMD mundima yekutsvaga.
2) mushure mekunge iwe waisa iwo CMD rairo, iyo yekukurumidza kuraira ine dema kuratidza ichafumura.
3) Nyora rairo 'ipconfig', Mumutemo wekukurumidza. Uyu murairo unosanganisira - ratidza default IP marongero & kumisikidzwa kweiyo system pamwe neiyo router yakabatana nayo.
Nzira yekuona iyo IP kero router paWindows
Nyora muDare rePaneru mune yekutsvaga bar uye pfuurira pane iyo icon Control Panel;
Dhinda Wona network renji & mabasa pasi Internet & Network;
Dzvanya pazita reWi-Fi, iyo yaunowana padyo neConnections;
Iwindo rapfuura richamuka. Dhinda paZvinyorwa;
Iwe uchawana iyo akagovana IP kero mu IPv4 Default Gateway.